Tijaabada talaalka Covid-19 Oo Soo Gaartay Kenya | Marsa News
Tijaabada talaalka Covid-19 Oo Soo Gaartay Kenya
Hargeisa:(Marsanews) Mid ka mid ah xarumaha cilmibaarista caafimaadka ee ugu waaweyn dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday inay gacan ka geysaneyso tijaabada tallaalka cusub ee ay Jaamacadda Oxford usoo saartay cudurka Covid-19.
Magaalada Kilifi ee ku taalla gobolka Xeebta ee waddanka Kenya ayaa laga billaabi doonaa howlaha tijaabada tallaalka.
Mas’uuliyiinta xaruntan oo lagu magacaabo Kemri-Wellcome trust ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan diiwaan galinta 400 oo shaqaale caafimaad ah oo la filayo inay isu xilqaamaan ka qeyb qaadashada tijaabada.
Howshan ayaa lagu tilmaamay mid qeyb ka ah dadaalka loogu jiro waxa loogu yeeray “tallaal dadka oo dhan anfaca”.
Guud ahaan dunida waxaa ka socda tartan ay cilmibaareyaasha iyo seynisyahannada ugu jiraan sidii dawo loogu heli lahaa cudurka safmarka ah ee faraha ba’an ku haya caalamka, ee Covid-19.
Mid ka mid ah kooxaha hoggaaminaya howsha raadinta tallaalka wuxuu saldhiggooda yahay Jaamacadda Oxford ee dalka UK – halkaasoo ay ka wadaan tijaabada dawada xalka u noqon karta cudurka oo lagu magacaabay ChAdOx1 nCoV-19 – taasoo lagu tijaabinayo in ka badan kun qof oo ku sugan UK.
Image captionQalabka lagu baaro Corona
Hadda waxaa dadaalka kusoo biiray cilmibaareyaasha Kenya. Afarta boqol ee qof ee tijaabada isu xilqaamaya ayaa laga doonayaa inay da’dooda ka sarreyso 18 sano, ayna yihiin shaqaale caafimaad oo rasmi ah, kuna sugan magaalo xeebeedka Kilifi.
Waxaa jiray muran hareeyay fikradda ku saabsan in tallaalka cudurrada lagu tijaabiyo qaaradda Afrika, laakiin cilmibaareyaashu waxay sheegeen inay oggolaansho sharci ah raadin doonaan ka hor inta aysan tijaabada guda galin.
Maxaa muhiim ka dhigay in tallaaka fayraska karona lagu tijaabiyo Afrkaanka?
Si kastaba ha ahaatee, saynisyahannada ayaa sheegaya inay muhiim tahay in Afrikaanku ay ka qayb qaataan tijaabooyinkan, iyagoo ku doodaya inay xagal daacin karto dadaallada lagu doonayo in lagu helo tallaal ka shaqeeya guud ahaan aduunka – oo aan u gaar aheyn dalalka hodonka ah.
Image captionShaqada tallaalkan waxay billaabatay bishii january
Bishii Maarso, Tedros Adhanom Ghebreyesus, madaxa hay’adda caafimaadka aduunka (WHO), ayaa ku dhawaaqay “Tallaal mideysan” oo aduunku u helo balanqaadyada dawo loo helo Covid19, oo ah cudurka asiiba neefmareenka ee uu sababo fayraska Karona.
Maaddaamma aan la helin daawo ilaa iyo hadda, tallaal shaqeyn kara wuxuu door weyn ka qaadan lahaa ka hortagga iyo xakameynta cudurka,sida ay sheegtay WHO.
Sidee u shaqeyaa tallaalku ?
Inkastoo doodda mucaaradka ku ah nooc kasta oo ka mid ah talaallada aysan aheyn wax cusub, doodda hadda ka taagan Afrika waxay ku saleysan tahay isir-kala sooc.